ညီလင်းသစ်: February 2011
Posted by ညီလင်းသစ် au 28.2.11 29 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 25.2.11 12 comments
ဒီဗီဒီ အခွေတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ ကျနော်သဘောကျတာ တစ်ခုရှိပါတယ်၊ အဲဒါက ဇတ်ကားရဲ့ တချို့ဇတ်ဝင်ခန်း တွေကို ဘယ်လို ရိုက် ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အပိုင်းလေးပါ၊ ဒီဗီဒီတိုင်းမှာတော့ မပါ,ပါဘူး၊ ပါတဲ့ အခွေ တွေမှာဆိုရင် ဘိုးနပ်စ် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ တခါတလေတော့လည်း ဒါရိုက်တာက စကားပြောပြီး ရှင်းပြတာ၊ တခါတခါတော့ ဘေးကနေ ကင်မရာ အပိုတစ်လုံးကနေ လိုက်ရိုက်ထားတာ၊ တခါတခါတော့ ဇတ်ဝင်ခန်းကို ပြနေရင်းနဲ့ နောက်ခံ စကားပြောနဲ့ ရှင်းပြတာ.. စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုး တွေ့ရတတ်တယ်၊ ဒါ့အပြင် တချို့ဇတ်ကားတွေမှာ မိတ်ကပ်ဘယ်လို လိမ်းခဲ့လဲဆိုတာပါ ပြထားတတ်တယ်၊ အထူးသဖြင့် special effect တွေပါတဲ့ အက်ရှင်ကားတွေမှာပေါ့၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေ၊ လူမဟုတ် တိရိစ္ဆာန်မဟုတ် အကောင်တွေကို ဘယ်လို ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖန်တီးသလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျင်း ရှင်းပြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်၊ ဒါတွေကို ခြုံငုံပြီး making of လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်၊
အဲဒီလို making of တွေ ပါလာပြီဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် ကျနော်ကြည့်လေ့ ရှိတယ်၊ ဒါတွေကို ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတာ အဓိကပေါ့လေ၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ နောက်တစ်ချက်လည်း ရှိပါသေးတယ်၊ အဲဒါက ဒီဇတ်ဝင်ခန်းကိုပဲ ခုနတုန်းက ရုပ်ရှင် ထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားခဲ့သလောက် making of မှာ ပြန်တွေ့တော့ အမြင် ပြောင်းသွားတာပါ၊ ဇတ်ဝင်ခန်းထဲမှာ ဥပမာ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး သေလုမျောပါး ခွဲရခါနီး ကြေကွဲကြတဲ့ အခန်း ဆိုပါစို့၊ မင်းသားက ညသန်းခေါင် တောအုပ်အလယ်မှာ လဲလို့၊ တကိုယ်လုံးလည်း ရွှံ့တွေဗွက်တွေ ပေလူးနေတဲ့အပြင် ရင်ဘတ်မှာလည်း လူဆိုးတွေပစ်သွားတဲ့ ကျည်ပေါက်ရာတွေနဲ့၊ သူ့ကို မင်းသမီးက ပွေ့လို့...၊ ဒီကြားထဲ မိုးက သူတို့ နှစ်ယောက်အပေါ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ရွာနေသေးတယ်၊ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျက်ရည်တွေက မိုးနဲ့အပြိုင် ပါးပြင်ပေါ်မှာ..၊ မင်းသားက အသက်ငင်နေလို့ နှုတ်ခမ်းတွေက တဆတ်ဆတ်တုန်လို့၊ မင်းသမီးက ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ကိုယ်လုံးလေး တုန်ပြီး တသိမ့်သိမ့်ရှိုက် လို့..၊ နောက်ခံ တီးလုံး မတိုးမကျယ်နဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့ အရက်စက်ဆုံးအခန်း၊ ဒီလို အခန်းမျိုးကို ကြည့်ရတဲ့အခါ ကျနော်တို့ အနည်းနဲ့အများ ဝမ်းနည်းမိမှာပါ၊ အထူးသဖြင့် ဇတ်လမ်းကို ဟိုးအစကတည်းက ထဲထဲဝင်ဝင် ကြည့်လာခဲ့ရင် ပိုပြီး နက်ရှိုင်းလိမ့်မယ်၊
ပြီးသွားတော့ ဒီအခန်းကိုပဲ making of မှာ ပြန်ကြည့်မယ်၊ အခုတော့ ပြောင်းသွားပြီ၊ မင်းသားက ရွှံ့ထဲမှာ ထိုင်ရင်း ဒါရိုက်တာ ညွှန်ကြား တာကို နားထောင်နေမယ်၊ သူ့ကို မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့သူက လိမ်းလို့၊ မင်းသမီးကလည်း တစ်ယောက် ယောက်ကို ဖုန်းဆက်နေမယ်၊ ရယ်လို့မောလို့၊ ကဲ, စမယ်ဆိုတော့ မင်းသမီးက မင်းသားကို ပွေ့လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်လုံး မုဒ်သွင်းမယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ သစ်ပင်ပေါ်က အသင့်စောင့် နေတဲ့ တစ်ယောက်က မီးသတ်ပိုက်ကို ဖွင့်ချလိုက်မယ်၊ ကင်မရာက သူတို့ နဲ့ ၅ ပေအကွာကနေ ရိုက်နေမယ်၊ ဘေးမှာ ထီးမိုးပြီး ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး၊ စက်ပစ္စည်းတွေက တပုံတခေါင်းနဲ့ ဓါတ်ကြိုးတွေကလည်း ရှုပ်ပွလို့၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ဒါရိုက်တာ က မော်နီတာကနေ အသေးစိတ်ကြည့်နေမယ်၊ ကဒ်လို့ အောက်လိုက်တဲ့ အချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ဒါရိုက်တာက ချီးကျူးစကားပြောရင်း သူတို့ကို လှမ်းနောက်လိုက်မယ်၊ ရှူတင် တခုလုံး ဝိုင်းရယ်ကြမယ်၊ မင်းသားရော မင်းသမီးပါ မြေကြီးပေါ်က ထလာကြရင်း ရယ်နေကြမယ်၊ အခုတော့ မိုးလည်း တိတ် သွားသလို သစ်ပင်ပေါ်က မိုးနတ်မင်းလည်း မီးသတ်ပိုက်ကိုင်ရင်း ပြန်ဆင်းလာမယ်၊
ကျနော် ဆိုလိုတာက ဒီဇတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုထဲကိုပဲ မြင်ထောင့်ပြောင်းသွားတာကိုပါ၊ အဓိက ကင်မရာက မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး နှစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကွက်ပြီးပြတုန်းက ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသလောက် ဒီကင်မရာကို ကျော်ပြီးလည်း ကြည့်လိုက်ရော ဒါဟာ အလုပ်,လုပ်နေကြတာပါလား ဆိုတာထက် ဘာမှထူးပြီး မခံစားရပါဘူး၊ အကူကင်မရာရဲ့ နေရာကနေ ကြည့်လိုက်တော့မှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းက ကွက်ကွက်ကလေးပဲဆိုတာ တွေ့ရတယ်၊ အညှိုးတကြီးနဲ့ ရွာချနေတဲ့ မိုးဆိုတာလည်း ၁၀ ပေပတ်လည်ထက် မပိုပါဘူး၊ ဒီစက်ဝိုင်းရဲ့ အပြင်မှာတော့ လူပေါင်းများစွာက လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို လုပ်နေကြတယ်၊ ဘယ်သူမှ မင်းသားမင်းသမီးနဲ့အတူ လိုက်ပြီး မငိုကြပါဘူး၊ တခါတခါ ကျနော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း အဓိက ကင်မရာက ပြသလောက်ကလေးပဲ မြင်ရတဲ့အခါ တချို့အဖြစ်အပျက်တွေက လတ်တလော မှာ လှုပ်ရှား၊ ရိုက်ခတ် တတ်လွန်းပါတယ်၊ ငိုစရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရယ်စရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ ဒီကာလရဲ့ အလွန်၊ အချိန်အပိုင်း အခြား တခုကြာတဲ့အခါ အကူ ကင်မရာရဲ့ နေရာကနေ ပြန်ကြည့်တော့မှ အဲဒီတုန်းက ရွာနေခဲ့တဲ့ ဒုက္ခမိုးဟာ ၁၀ ပေ ပတ်လည်ထက် မပိုပါလားဆိုတာ သတိပြုမိ တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီမိုးရဲ့ အောက်မှာ သရုပ်ဆောင်သူတွေက ကြေကွဲ သလောက်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လောက,ကတော့ လည်ပတ်မြဲပါပဲ၊ အဆုံးကြတော့လည်း ဒီရှူတင်သိမ်းပြီး အားလုံးက နောက်ရှူတင်ကို ထွက်သွားကြမှာပဲ မဟုတ်လား..၊ အဲဒါတွေကြောင့်လည်း behind the scene ကိုပြတဲ့ making of တွေကို ကျနော် ကြိုက်မိတာ ထင်ပါတယ်၊
အောက်က ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ကျနော့်ရဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးကို ရိုက်တုန်းက setup ဓါတ်ပုံတွေပါ၊ ကိတ်မုန့်လေးက သူ့ချည်းပဲ ကြည့်ခဲ့တုန်းက အထိုက်အလျောက် ချစ်စရာကောင်းသလောက် အခုလို making of မှာ လည်းကျရော သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အနုပညာမဆန်တာကို သတိထားမိမှာပါ၊ တကယ်ပါ...၊ တခါတခါ အဓိက ကင်မရာ ရှေ့မှာ သရုပ်ဆောင်ရတာ သိပ်မောလွန်းတဲ့အခါ ဒုတိယ ကင်မရာနောက်ကို ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားရပ်ပြီး ရှူတင် တစ်ခုလုံးကို ကြည့်,ကြည့်ပါ၊ အနည်းဆုံးတော့ မိုးရွာနေတာ ကွက်ကွက် ကလေးပဲ ဆိုတာ မြင်မိမှာပါ...။ ။
၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 22.2.11 29 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 20.2.11 27 comments
အစားအသောက် အကြောင်းတွေ၊ ချက်နည်းပြုတ်နည်း အကြောင်းတွေကို ပုံနဲ့တကွ တင်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို ရောက်သွားရင် ခံစားချက် ၂ မျိုးနဲ့ ပြန်,ပြန်လာရလေ့ ရှိပါတယ်၊ ပထမတစ်ခုက ဗိုက်ဆာတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒုတိယ တစ်ခုကတော့ (နဲနဲ) အားကျတာလို့ ပြောရမယ် ထင် တယ်၊ :) ကျနော်လည်း တခါတခါ အဲဒီလို ချက်တတ်ချင်လိုက် တာ...၊
ဒီနေ့ ညနေတော့ ကိတ်မုန့်လေး တစ်ခုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိတ်မုန့်လုပ်တာပါ၊ ဖုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆိုင်က အသင့်ရောင်း တဲ့ ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကိုဝယ်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပစ်လိုက်လို့ ကိတ်မုန့်လုပ်တာလို့ ပြောတာပါ၊ ပုံမှန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း ဆိုရင်တော့ အဲဒီပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ အစီအရီ ထွန်းရမှာပါ၊ ဒီနေရာမှာ ကြားဖူးတဲ့ ဟာသလေးတစ်ခုကို ပြောပြရဦးမယ်၊ အသက်အပိုင်းအခြား တစ်ခုကို ရောက်လာပြီ ဆိုတဲ့အခါ မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်းတော့မယ်ဆိုရင် ဘေးမှာ မီးသတ်ဘူးတစ်ဘူး အဆင်သင့် ရှိပါစေ-တဲ့၊ များလွန်းတဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေကြောင့် မီးဘေး စိုးရိမ်ရလို့ပါ-တဲ့၊ အခုလည်း မီးရေးထင်းရေး ကာကွယ်တယ်ပဲ ဆိုဆို၊ မီးသတ်ဘူး မဆောင်ချင်ဘူးပဲ ပြောပြော ကိတ်မုန့်လေးတစ်လုံးတော့ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်လေ...၊ ဖယောင်းတိုင်အစား ကျနော်က စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိတာတွေကို အစားထိုးလိုက်တာကိုး၊ ခံစားကြည့်ပါဦး... ...နော့၊
5DmarkII + EF 100mm f/2.8 Macro USM, 100mm, f/11, 1/200, iso100
Strobist: 1 flash YN-650 camera right, behind the subject, power 1/8, 1 flash Speedlite 430Ex camera left, in front of subject, power 1/16, diffused by DIY light tent, flash triggered by Yongnuo RF-602.
အောက်ခံ ကိတ်မုန့်က Mille feuilles လို့ခေါ်တဲ့ ကိတ်ပါ၊ မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ အရွက်တစ်ထောင်-တဲ့၊ အလွှာပါးပါးလေး တွေ အများကြီးနဲ့ လုပ်ထားလို့ ဒီလိုခေါ်တယ် ထင်တာပဲ၊
Strobist: same as above.
ဒီကိတ်မုန့်ကို အမျိုးအစား အရသာမတူတဲ့ အရာ ၄ မျိုးနဲ့ အလှဆင်ပါတယ်၊ ရှေ့ဖက်က ငရုတ်သီးနဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်က လိမ္မော်သီးကတော့ အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ပါတယ်၊ အနောက်ဖက်မှာ နဲနဲကွယ်နေတာက ချော့ကလက်တောင့် ဖြစ်ပြီးတော့ အလယ်က ခရမ်းရောင် ဗူးကလေးတွေကတော့ Nespresso ကော်ဖီ capsule ပါပဲ၊ What else?
5DmarkII + EF 100mm f/2,8 Macro USM, 100mm, f/2.8, 1/200, iso100
Strobist: 1 flash YN-650 camera right, in front of subject, power 1/16, 1 flash Speedlite 430Ex camera left, behind the subject, power 1/16, diffused by DIY light tent, flash triggered by Yongnuo RF-602.
ဒီပုံမှာတော့ အလင်းကို ပြောင်းပြန်ပေးထားပါတယ်၊ အပေါ်နှစ်ပုံမှာက ဘယ်ကနေညာ ထောင့်ဖြတ်ကို ဖလက်ရှ် ၂ ခုနဲ့ ပေးထားပြီးတော့ ဒီမှာကတော့ ညာကနေဘယ် ထောင့်ဖြတ်ကို ပြောင်းပြန်, ပြန်ယူထားတာပါ၊ ဒီပုံတွေအားလုံးရဲ့ ကင်မရာ setting က အတူတူပါပဲ၊ မတူတာက အလင်းရဲ့ အပြင်း၊ အပျော့ပါ...၊
Strobist: 1 flash YN-650 camera right, power 1/8, 1 flash Speedlite 430Ex camera left, slightly behind the subject, power 1/16, diffused by DIY light tent, flash triggered by Yongnuo RF-602.
အခုလို ကိတ်မုန့်လှီးတဲ့ ပွဲမျိုးတွေမှာ အနောက်တိုင်းဓလေ့က အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း သိပ်မရင်းနှီးဘူးဆိုရင် လူတစ်ယောက်ကို အသက်မမေးကြပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကိုဆို ပိုပြီးတောင် မမေးကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် နဲနဲလည်း ရင်းနှီးတယ်၊ အတည်တဝက်၊ အရွှန်းတဝက်နဲ့လည်း နောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ How old are you? အစား How young are you? လို့ မေးတတ်ကြပါတယ်၊ ကျနော့်ကိုတော့ အဲဒီလို ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ မေးစရာ မလိုပါဘူး၊ တခါတည်းပဲ ပြောလို့ရပါတယ်၊ ကိတ်မုန့်ပေါ်က ပစ္စည်း ၄ မျိုးစုစုပေါင်းက ကျနော့် အသက်ပါပဲခင်ဗျား၊ :D ကဲ, ကြိုက်ရာကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ... ...။ ။
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 17.2.11 25 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 14.2.11 17 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 12.2.11 12 comments
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ညမှာ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံလေးပါ၊ ကျနော်တို့ အားလပ်ရက် တစ်ပတ်တာ ခရီးထွက်နေတဲ့ ကာလမှာပါပဲ၊ အဲဒီညမှာတော့ မအိမ်သူနဲ့သားက ဧည့်ခန်းက ထိုင်ခုံမှာပဲ အိပ်ပျော်နေကြတယ်၊ တကယ်တော့ ညနေ ၆ နာရီ ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိသေးတာ...၊ ညစာတောင် မစားရသေးဘူး၊ စာဖတ်နေကြရင်းနဲ့ကို အိပ်ငိုက်ပြီး အိပ်ပျော်သွား ကြတာ၊ အအိပ်အနေ နည်းတဲ့ ကျနော့်မှာသာ ယောင်တောင်တောင်နဲ့ ထိုင်နေမိတယ်၊ ဒါနဲ့ ဒီပုံလေးကို ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ တခုခုကိုလည်း လွမ်းနေမိသလိုပဲ...၊
5DmarkII + 24-105mm EF f/4 L, 75mm, f/5.6, 1/60, iso200
Strobist: 1 Yongnuo YN-560 camera right, power 1/32 bare, 1 Canon speedlite 430Ex camera left as fill, power 1/64 Gary Fong light sphere, flash triggered by Yongnuo RF-602 remote trigger.
ဒီပုံကို ရိုက်တော့ ဘက်ဂရောင်းက မီးလင်းဖိုက အရမ်းလင်းပါတယ်၊ အဲဒီမီးကို ယူပြီးရိုက်ရင် main subject ဖြစ်တဲ့ ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ခွက်က မှောင်သွားမယ်၊ တခါ ဝိုင်ပုလင်းကို အဓိကယူရင် သူ့အပေါ်မှာ အလင်းနည်းတဲ့အတွက် ကင်မရာက အဲဒီပုလင်းအတွက် အလင်းကို မြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီလိုဆိုရင် နောက်ဖက်က မီးလင်းဖိုက နဂိုကထက် ကို ပိုပြီး လင်းလာလိမ့်မယ်၊ main subject ကိုကျော်ပြီး ကြည့်သူရဲ့ အာရုံကို အရင်ဆုံး ဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်၊ ကျနော်က မီးလင်းဖိုရဲ့ ဘက်ဂရောင်း အငွေ့အသက်လည်း ပါချင်၊ သူ့ဆီက အနှောင့်အယှက်ကိုလည်း မလိုချင်တဲ့အတွက် အမှောင်ခပ်များများနဲ့ setting လုပ်ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့အလင်းကို flash ကနေ ပြန်ယူပါတယ်၊ Off-camera flash ဒါမှမဟုတ် strobist နည်းပါပဲ၊ Setting နဲ့ data အသေးစိတ်ကိုတော့ ပုံရဲ့အောက်ဖက်မှာ ပေးထားပါတယ်၊ အောက်က ပုံကတော့ ပထမဆုံး test shot ရိုက်တုန်းက ပုံပါ၊ ဘာ flash မှ မပါ,ပါဘူး၊
မီးလင်းဖိုက subject ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့တောင် တောက်ပနေသလို သူ့အလင်းကြောင့်လည်း နောက်ဖက်က နံရံတို့၊ heater ခလုတ်တို့ပါ မလိုအပ်ဘဲ ပေါ်လွင်လွန်းနေတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်၊ နောက်တစ်ခု ပြောစရာ ရှိတာက ဝိုင်ခွက်ပါ၊ ခြေထောက်တိုတိုနဲ့ သိပ်မလှဘူး၊ ဒါကတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး၊ သူများ အိမ်မှာ ရိုက်ရတာဆိုတော့ ရှိတာနဲ့ပဲ၊ လိုက်ရှာကြည့်တော့လည်း မီးဖိုချောင်တခုလုံးမှာ အဲဒီလိုခွက် တမျိုးပဲ တွေ့ရတယ်၊ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီ နည်းစနစ်နဲ့ ပုံတွေ အမျိုးမျိုး ရိုက်ကြည့်ချင်နေ မိတယ်၊ တကယ်တော့ ကင်မရာ ခလုတ်ကို နှိပ်တာထက် အလင်းကို 'မြင်' အောင် ကြည့်နိုင်ဖို့က ပိုပြီးခက်ပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံဆိုတာက အလင်းနဲ့ရေးတဲ့ ပန်းချီပဲ မဟုတ်လား....။ ။
(Strobist အကြောင်း ပိုသိချင်ရင် ဒီမှာ သွားဖတ်လို့ ရပါတယ်။)
၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.2.11 13 comments
ကျနော်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ခရီးတွေအကြောင်း တခါတခါ ပြန်တွေးမိရင် ဒီအကြောင်းလေးက ရံဖန်ရံခါ ခေါင်းထဲ ရောက်,ရောက်လာတတ်ပါတယ်၊ တချို့နေရာတွေက ဘဝမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်သွားလို့ ရပေမယ့် တချို့နေရာတွေ အတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျနော်ပြောပြမယ့် အဲဒီခရီးက နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ခရီးပါပဲ၊ ဒီခရီးကို သွားခဲ့မိလို့ ပြန်တွေးတိုင်း ကျေနပ်ရပေမယ့် တခါတခါတော့လည်း ငါ,အဲဒီကို တကယ်ပဲ သွားခဲ့တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား-လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဇဝေဇဝါနဲ့...၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ် လောက်က ဆိုပေမယ့် အဝေးကြီး နောက်မှာ ကျန်နေခဲ့သလိုပဲ၊ ခရီးရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ လည်း ဘယ်မှာ ပြန်ရှာရမလဲ မသိတော့ဘူး၊ ကျနော် အလည်သွားခဲ့တဲ့ နေရာက လူအချို့ နေခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ် တစ်အိမ်ပါ၊ တကယ်တော့ အိမ်တစ်အိမ်ဆိုတာထက် ဂူတစ်လုံးဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်၊ ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် ကျောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်းက ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေခဲ့တဲ့ ပြဒါးလင်း ဂူကိုပါပဲ...၊
၁၉၉၇-၉၈ တဝိုက်လောက်က ကလောမြို့ကို ကျနော်မကြာခဏ ရောက်နေဖြစ်တယ်၊ အဲဒီမှာနေတဲ့ ထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လောလောလတ်လတ် အသိအကျွမ်းဖြစ်ပြီးကာစ၊ လူကလည်း အလုပ်မရှိ အားနေတဲ့အချိန်၊ ရာသီဥတုကလည်း ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ခပ်အေးအေးဒေသ ဆိုတော့ ဘာပြော ကောင်းမလဲ၊ ရန်ကုန်နဲ့ ကလောက အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ပဲ၊ ထွန်းထွန်းကလည်း Trekking ဝါသနာပါတော့ ကျနော်တို့ ကလောတဝိုက်က ပလောင်ရွာများစွာကို သွားလည်ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ ပင်းတယ သွားလိုက်၊ အင်းထဲဆင်းလိုက်၊ တောင်ကြီးတက်လိုက်၊ ကလောမှာ ပြန်အိပ်လိုက်၊ ပလောင်တွေဆီ သွားလိုက်နဲ့...၊ ကလောတစ်ခေါက်သွားရင် ကျနော့်မှာ ရန်ကုန်ကို တော်တော်နဲ့ကို မပြန်နိုင်ဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဂူတွေ အကြောင်းပြောကြရင်း ပြဒါးလင်း (ပဒလင်း၊ ပဒတ်လှိုင် လို့လည်းခေါ်ပါတယ်) အကြောင်းက ပါလာတယ်၊ ကျနော်တို့က မနုဿကျော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့် တို့ရဲ့လက်ချာတွေ၊ ဦးအောင်သော်ရဲ့ ပြဒါးလင်း တူးဖော်မှုစာတမ်း၊ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ စာစုတွေ နဲ့ ဒီဂူကို ရင်းနှီးနေခဲ့တယ်၊ ရောက်နေတာက လည်း ကလောမှာဆိုတော့ ရွာငံနားမှာရှိတဲ့ ပြဒါးလင်းနဲ့လည်း သိပ်မဝေးဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားဘဲ သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်၊ သွားမှာက လေးယောက်...၊ ကျနော်ရယ်၊ ထွန်းထွန်းရယ်၊ ကလောမှာပဲ နေတဲ့ ကိုစံခါး (သူ့နာမည် အမှန်က ရှန်ကာ၊ ဂေါ်ရခါးကပြား)၊ ပြီးတော့ ရန်ကုန်က ကျနော်နဲ့ ပါလာတဲ့ ကိုပေါက်၊ ကိုပေါက်က တိုက်ကြီးဇာတိ၊ သူက ပြဒါးလင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အမဲလိုက်တာ ဝါသနာပါ လို့ တောထဲတောင်ထဲ သွားနေရရင် ပျော်နေတဲ့လူ...၊ သွားမယ်သာ ပြောတာ၊ ကျနော်တို့မှာ ဘာမှမပြည့်စုံ ဘူး၊ ကျနော်တို့က ရှေးဟောင်းကလည်း မဟုတ်၊ ဘူမိကလည်း မဟုတ်၊ သစ်တောကလည်း မဟုတ်၊ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့သာ သွားကြမှာ၊ ဆေးဝါးမရှိ၊ လမ်းလျှောက်ဖိနပ် မရှိ၊ မိုးကာမရှိ၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင် မရှိ၊ တောတက်မယ့် လူတစ်ယောက် ရှိသင့်တဲ့ဟာ တခုမှ မရှိဘူး၊ ဒါတွေဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလည်း မရှိဘူး၊ ဒီတော့ ထွန်းထွန်းကပဲ ဟိုလိုက်ငှား၊ ဒီလိုက်ငှား လုပ်ရတော့တယ်၊
အထိုက်အလျောက် အဆင်သင့်ဖြစ်တော့ အောင်ပန်းဈေးနေ့ကို စောင့်တယ်၊ သွားရမှာက အောင်ပန်း-ရွာငံ ဈေးကားကိုစီး၊ ရွာငံမှာ တညအိပ်၊ နောက်တစ်နေ့မှာ ပြဒါးလင်းကို ခြေကျင်လျှောက်...၊ ဒီလိုနဲ့ ဈေးနေ့ ရောက်လာတော့ ကလောကနေ အောင်ပန်းကို သွားလိုက်တယ်၊ ဟိုမှာ စောနေသေးတော့ ဈေးလက်ဖက် ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေရသေးတယ်၊ ဆိုင်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်သွားကြတဲ့ ပအိုဝ့်တွေ၊ ပလောင်တွေကို ငေး ကြည့်ရင်း လူရိုင်းတို့ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိရာဆီ သွားမယ့်ခရီးအတွက် ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်၊ ရှေ့မှာ ဘာမှ ကြိုမမြင်နိုင်ဘူး မဟုတ်လား...၊
ဈေးကွဲချိန်မှာ ရွာငံပြန်တဲ့ ဒိုင်နာကားကို စီးရတယ်၊ တစ်စီးတည်းသောကား..၊ ခေါင်မိုးပေါ်က ယောင်္ကျား တွေနေရာ၊ ကားထဲမှာက ခြင်းတောင်းကြီးတွေ နဲ့အတူ မိန်းမတွေ ထိုင်ကြတယ်၊ ရွာငံသွားတဲ့လမ်းက အောင်ပန်း ပင်းတယလမ်းကနေ တဝက်လောက်မှာ ဘယ်ဖက်ကို ခွဲထွက်သွားတာပါ၊ ဒိုင်နာကား ခေါင်မိုး ပေါ်က ဝက်ခြံထဲ မှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်ရင်း အောင်ပန်းကနေ ရွာငံသွားခဲ့တဲ့ လမ်းမြင်ကွင်းကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင် ပါဘူး၊ လမ်း တဖက်တချက်က စိုက်ခင်းတွေက အရမ်းလှတယ်၊ ပို့စကဒ်တွေထဲက ရှုခင်းမျိုးတွေနဲ့ ဆင်တယ်၊ တောင်ကုန်း ပြေပြေလေးတွေပေါ်မှာ စိုက်ခင်းအစိမ်း တထပ်၊ မြေနီတထပ်နဲ့၊ တခါတရံ ကုန်းထိပ်မှာ သစ်ပင် တစ်ပင်တလေ ရှိတတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ပြည်လုပ် ရောင်စုံ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ခေါင်းပေါင်း၊ ဝတ်စုံအမည်းတွေနဲ့ ရိုးတံရှည် ပေါက်တူးကိုင် ပအို့ဝ် တောင်သူတွေ လည်းရှိတတ်တယ်၊ လေက လတ်ဆတ်တယ်၊ အဲဒီမြင်ကွင်းလေးကို ပြန်မြင်ယောင်တိုင်း ရင်ဘတ်ထဲမှာ နူးညံ့တဲ့ နာကျင် လွမ်းဆွတ်မှုလေးတခု ဖြတ်သန်း၊ တွန်းတိုက်သွားလေ့ ရှိပါတယ်...၊
ရွာငံရောက်တော့ တခုတည်းသော တည်းခိုခန်းမှာ တည်းကြတယ်၊ နာမည်တော့ မေ့နေပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် နာမည် မရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ကျေးလက်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရွာမှာဧည့်သည် ရောက်တာနဲ့ နာရီပိုင်း အတွင်း တရွာလုံး သိနှင့်ပြီးပြီ၊ ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာလာ လုပ်ကြတာလဲ၊ ဒါဟာ ဒီနေရာမှာတော့ ကျနော်တို့ အတွက် ကောင်းသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ညနေစောင်းလောက်မှာ ရွာလူကြီးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ကျနော်တို့ကို လာတွေ့တယ်၊ ကျနော်တို့ ပြဒါးလင်း သွားမယ့်ခရီးမှာ သူလမ်းပြ လုပ်ပေးနိုင် တယ်ဆိုတာ လာပြောတာပါ၊ လမ်းပြခ,က မှတ်မှတ်ရရ ကျပ် ၂၀၀၀...၊ ဒါနဲ့ စကားစမြည် ပြောကြရင်း ခရီး စဉ်ကို ရေးဆွဲကြတယ်၊ နေ့တဝက်လောက် လျှောက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသွားလမ်း ရှိလို့ တောထွင်ပြီး သွားစရာ မလိုကြောင်း၊ ဂူမှာ ညအိပ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လမ်းမှာစားမယ့် နေ့လယ်စာ၊ ဟိုမှာစားမယ့် ညစာ၊ နောက်တစ်နေ့ လမ်းမှာစားမယ့် နေ့လယ်စာတို့ကို သူကပဲ စီစဉ်ပေးမယ့် အကြောင်း၊ ဒါတွေဝယ်ဖို့ လိုအပ် တဲ့ ငွေကြေး အနည်းငယ်သာ သူ့ကို ပေးထားစေလိုကြောင်း အဲဒီလူက ပြောတယ်၊ အိုကေ ပေးမယ်..၊ ဒါနဲ့ ကျနော်တို့က 'ဒါဆို ကျနော်တို့ဖက်ကကော ဘာပြင်ဆင်ရမလဲ' ဆိုတော့ 'အရက်သာဝယ်'တဲ့၊ တောထဲဆို တော့ ဒါဟာ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်ပါတဲ့၊ ဒါနဲ့ အဲဒီမှာ သောက်ကြတဲ့ ဒေသထွက် 'ရွှေသမင်' ဆိုတဲ့ အရက်တစ်လုံး ဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါဟာ ပြဒါးလင်းခရီးအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်မှုပါပဲ၊ အို..ဂူအောင်းလူသား တို့.., အသင်တို့၏ နေရပ်သို့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ကား အဆင်သင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီ...၊
နောက်တစ်နေ့ မနက် ၆ နာရီမှာ ကျနော်တို့ စ,ထွက်တယ်၊ အောင်ပန်းက ဝယ်လာတဲ့ မုန့်ကြွပ်ကို ရေနဲ့ မျှောချပြီး မနက်စာ,စားလိုက်တယ်၊ ညအိပ်ခရီး ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့အားလုံး အင်္ကျီအပိုတထည်စီ နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပါပဲ၊ ကိုပေါက်ကတော့ မုဆိုးပီပီ လက်နက်တစ်ခုခု မပါရင် တောမတက်တတ်လို့ သူ့ကို ဓါးမြှောင်တစ်ချောင်း ပေးထားလိုက်တယ်၊ လမ်းခရီးက အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါတယ်၊ လမ်းမှာ ဝါးရုံတောတွေ အများကြီး ဖြတ်ခဲ့ရတာ မှတ်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့် လူသွားလမ်းက ရှိပြီးသားဆိုတော့ အေးအေးလူလူ လျှောက် လို့ရတယ်၊ ပြီးတော့ တောင်ခါးပန်းတွေကို ပတ်ပြီး မြေပြန့်ဖက်ကို ဆင်းတာဖြစ်လို့ မပင်ပန်းပါဘူး၊ အကောင် ပလောင်ဆိုလို့ တထွာလောက် ရှည်တဲ့ ကင်းခြေများ တစ်ကောင်နဲ့ မြက်လျှောလိုလို မြွေတစ်ကောင်ပဲ တွေ့တယ်၊ လမ်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ လမ်းပြကြီးယူလာတဲ့ ကောက်ညှင်းထုပ်တွေကို နေ့လယ်စာအဖြစ် စားကြ တယ်၊ မြန်မြန်စားပြီး များများဆက်လျှောက် ရပြန်တယ်၊
ဒီလိုနဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီထိုးဖို့ ၁၀ မိနစ်အလိုမှာ ကျနော်တို့ ပြဒါးလင်းဂူကို ရောက်ပါတယ်၊ ဂူ ၁ နဲ့ ဂူ ၂ ဆိုပြီး နှစ်ခုရှိရာမှာ ဂူ ၁ ကို အရင်ရောက်တယ်၊ ရောက်ခါနီး နာရီဝက် အလိုလောက်မှာ လမ်းပြကြီးက ရောက်တော့မယ်လို့ ဆိုကတည်းက ကျနော် ရင်တွေခုန်နေခဲ့ပြီ၊ စပြီး တွေ့ရတာက သစ်ပင်တွေ၊ ခြုံနွယ်တွေ အောက်က ထိုးထွက်နေတဲ့ ဂူရဲ့အမိုးစွန်း...၊ ကျနော်တို့အားလုံး မပြေးရုံတမယ် ခြေလှမ်းတွေ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းလိုက်ကြတယ်၊ ဂူက နဲနဲ အမြင့်မှာရှိလို့ နီးလာပေမယ့် ဂူထဲကို မမြင်ရသေးဘူး၊ အဲဒီမှာ ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရတာက အုတ်တံတိုင်းကြီး...၊ ဟုတ်တယ်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနက ခတ်ထားခဲ့တဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြီး၊ ဝင်ဖို့ သံပန်းတံခါး တစ်ခုရှိပေမယ့် သော့ခတ်ထားတယ်၊ သော့ကို တောင်ကြီးမြို့ ရှေးဟောင်းက ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ လမ်းပြကြီးက ပြောတယ်၊ ပထမတော့ ကျနော်တို့ စိတ်ညစ်သွား တယ်၊ ဂူထဲကို ဘယ်လို ဝင်ကြမလဲ၊ ဒီအထိ ရောက်လာပြီးမှ လှည့်ပြန်ဖို့ကတော့ လုံးဝ စိတ်မကူးဘူး၊ တောင်ကြီးမှာ အစောကြီးထဲက သော့သွားတောင်းရင်လည်း ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့က အဖွဲ့အစည်း ကမှ မဟုတ်တာ...၊ ဒါပေမယ့် အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့သာ ရောက်အောင် လာခဲ့တာ၊ ရောက်မယ်၊ မြင်မယ်၊ ခံစားမယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်က ဒါပဲ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ကြမယ့် သူတွေမှ မဟုတ်တာ..၊ ဒီလိုတွေး ပြီး ကျနော်တို့ အားလုံး လိပ်ပြာသန့်စွာနဲ့ အုတ်တံတိုင်းကို ကျော်ဝင်ခဲ့ကြတယ်၊
ဂူက မနက်ပါဘူး၊ မိုးဗြဲဒယ်ကို ဒေါင်လိုက်ထောင်ထားသလို ခပ်ပက်ပက် ပုံစံ...၊ ပေ ၃၀-၄၀ လောက်ပဲ နက် မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီဂူထဲမှာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ နဲ့ ၁၂,၀၀၀ ကြားမှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ တကယ်ကို နေထိုင် သွားခဲ့ကြတယ်၊ ရှေးဟောင်းက ဒီဂူထဲမှာ ကျောက်လက်နက်တွေ အများကြီး တွေ့ခဲ့ တယ်၊ ကျောက်ဓါး၊ ကျောက်ပုဆိန်လို အသွားချွန် ကိရိယာတွေ၊ ကျောက်တင်းပုတ်လို ဟာတွေအပြင် တိရိစ္ဆာန်အရိုးနဲ့ လူအရိုးတွေပါ တွေ့ခဲ့တယ်၊ သုတေသနပြုချက်တွေ အရတော့ ကျောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်း၊ ကျောက်ခေတ်သစ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်၊ ဂူအတွင်းပိုင်းကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဘယ်ဖက် ဂူနံရံကိုလည်း မော့ကြည့်လိုက်ရော... ကျနော်အတွေ့ချင်ဆုံး အရာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့တယ်၊ နံရံဆေးရေး ပန်းချီ...၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူး၊ မြင်ဖူးနေခဲ့တဲ့ ကျောက်ခေတ်လူရိုင်းတို့ရဲ့ ပန်းချီ၊ နွားသားအမိပုံ၊ ငါးပုံ၊ လက်ချောင်းပုံ၊ နေမင်းပုံ၊ သမင်ပုံ အစရှိသဖြင့်...၊ ဒါတွေကို ၁၀ ပေလောက်အမြင့်မှာ ဆွဲထားတယ်၊ ဆေးနီ ကိုသုံးပြီး တစ်ကြောင်းမျဉ်းနဲ့ ဆွဲထားတယ်၊ နံရံအောက်ခြေမှာ ပဲ့ကျနေတဲ့ ကျောက်တုံးအပိုင်းအစတွေ ရှိလို့ အဲဒီပေါ်တက်ပြီး ပန်းချီတွေကို အနီးကပ် ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ နေဒဏ်လေဒဏ်ကြောင့် အတော့်ကို မှိန်နေပါပြီ၊ ကျနော့်ခေါင်းထက်မှာ အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့ အနားစွန်းလေးကို လက်ညှိုးထိပ်နဲ့ ဖွဖွလေး ထိထား ကြည့်မိတယ်၊ ကျနော် ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေ ထ,သွားသလိုပဲ၊ ဒီပုံကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်သောင်းလောက်က ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ၊ လူငယ်၊ လူကြီး ဘယ်သူမှန်းမသိနိုင်တဲ့ ကျောက်ခေတ်လူသားတစ်ယောက် ဆွဲသွားခဲ့တယ်၊ တစ်ယောက်ထက်လည်း ပိုချင်ပိုမယ်၊ အခု ကျနော်ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ရပ်ကောင်း ရပ်နေခဲ့လိမ့်မယ်၊ ကျောက်ခေတ်သစ်ဆိုတော့ အဝတ်အစားက ဘယ်လိုဝတ်ကြလဲ၊ ဟောဟိုက အလယ်ခေါင်မှာ မီးဖိုကြီးတစ်ခု လည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့၊ ဒီအထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များ နေခဲ့ကြသလဲ၊ စာတွေ့သာ သိခဲ့ရတဲ့ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်တစ်သောင်းက ပုံရိပ်တွေကို အတွေးတွေနဲ့ ကျနော် လိုက်ဖမ်းနေမိတယ်၊ အကြာကြီးပါပဲ...၊ ကျနော် လူရိုင်းတို့ရဲ့ 'အိမ်' ကို တကယ်ပဲ ရောက်နေခဲ့ပြီ...၊
ဂူ ၁ မှာ တစ်နာရီကျော်လောက် နေပြီးမှ ကိုက် ၂၀၀ လောက်အကွာမှာ ရှိတဲ့ ဂူ ၂ ဖက်ကို ဆက်ထွက်လာ ခဲ့တယ်၊ အဲဒီ ဂူ ၂ အဝလည်းရောက်ရော... လူတွေ အများကြီး တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ယောင်္ကျားတွေ၊ မိန်းမ တွေ၊ ကလေးငယ်တွေ...၊ မရှိဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ အယောက် ၂၀ ဝန်းကျင်ပဲ၊ ရုတ်တရက် ဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း လန့်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် တော်သေးတယ်၊ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေတော့ မဟုတ်လို့...၊ နောက်မှ သိရတာက သူတို့က သိပ်မဝေးတဲ့ ရွာကနေလာကြတာ၊ ရွာနာမည်က 'အရေးမဆို' ရွာတဲ့၊ အဲဒီရွာက ဘုန်းကြီးက ဒီဂူထဲမှာ လာပြီးတရားထိုင်တော့ သူတို့ကလည်း ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ပေးရ အောင် လိုက်လာခဲ့ကြတာ၊ ကျနော်တို့ကိုလည်း သူတို့က အထူးအဆန်းလို ကြည့်လို့၊ တရားထိုင်ဖို့လည်း မဟုတ်၊ ဘာလည်းမဟုတ်နဲ့ ဒီအထိတောင်လာတယ် ဆိုတော့ နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့...၊ ဒါပေမယ့် ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေပီပီ အင်မတန်ကို သဘောကောင်းကြတယ်၊ အဲဒီနေ့ ညစာကို ကျနော်တို့အတွက် သူတို့ကပဲ ချက်ပေးခဲ့တယ်၊
ဒီဂူ ၂ ကတော့ တော်တော်ကြီးပါတယ်၊ ပေ ၈၀၀ လောက်နက်ပြီးတော့ အထဲမှာလည်း ဂူအခန်းငယ်တွေ ၉ ခန်းတောင် ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် နှစ်နေရာ၊ သုံးနေရာလောက်မှာ ဂူရဲ့အမိုးက ပေါက်နေတော့ အဲဒီကဝင်တဲ့ အလင်းနဲ့ အထဲမှာ အတော်အတန် လင်းပါတယ်၊ ဂူဝမှာ စေတီတစ်ဆူ တည်ထားတယ်၊ အထဲမှာတော့ ဂူအမိုးကနေ ကျောက်စက်ရေတွေ တစက်စက်နဲ့ စီးကျတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးပဲ၊ ဒီရေတွေကြောင့် ကျောက်စက်ပန်းဆွဲနဲ့ ကျောက်စက်မိုးမျှော်တွေလည်း အများကြီးတွေ့ရတယ်၊ ဂူထဲမှာ စိမ့်ပြီးအေးနေတယ်၊ ဒီဂူထဲမှာတော့ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေခဲ့တဲ့ လက္ခဏာ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်၊
'အရေးမဆို' ရွာသားတွေက ထမင်းချက်ပေးတော့ ကျနော်တို့နဲ့ လမ်းပြကြီးလည်း အေးအေးဆေးဆေး 'ရွှေသမင်' ဖမ်းထွက်နေ လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မမှောင်ခင်မှာ ထမင်းအမြန်စားပြီး ညကို စောင့်နေလိုက် တယ်၊ သစ်ပင်ဝါးပင်တွေနဲ့မို့ ညနေစောင်းတာနဲ့ ညက ချက်ချင်းမှောင်သွားတယ်၊ ရွာသားတွေကိုလည်း ဖယောင်းတိုင်လေးတွေနဲ့ ခဏလားပဲ တွေ့လိုက်ရတယ်၊ အားလုံး အလျှိူအလျှိူ ပျောက်ကုန်ကြတယ်၊ အဲဒီမှာ ကျနော် ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ၊ ကျနော့်မှာ မီးခြစ်လည်းမရှိဘူး၊ ဖယောင်းတိုင်လည်း မရှိဘူး၊ အိပ်မယ့် နေရာကို ညနေက ကြည့်ထားတာ၊ အခုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဒါနဲ့ ဂူအတွင်းထဲကို နဲနဲဝင်လိုက် ပြီး အမှောင်ထဲမှာ အကြာကြီး ရပ်နေလိုက်ရတယ်၊ မျက်စိက အမှောင်ကို ကျင့်သားရတော့မှ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ဆက်ဝင်သွားပြီး ဘယ်ဖက်က ဂူအခန်းငယ်လေးဖက်ကို သွားလိုက်တယ်၊ ကျနော်မှတ်ထားခဲ့တာလည်း ဒီလိုနေရာပဲ၊ သေချာအောင် အသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ့ ခေါ်ကြည့်တော့ ထွန်းထွန်းက ပြန်ထူးတယ်၊ သူ့မှာလည်း ဘာမီးမှ မရှိဘူး၊ ကိုပေါက်က ဒီလိုနေရာရောက်မှ ဒီအတိုင်းပြန်သွားရင် မတန်ဘူးဆိုပြီး ဂူအတွင်းထဲ ဝင်သွားပြီး တရားသွားထိုင်တယ်-တဲ့၊ လမ်းမှာတုန်းကတော့ အမဲလိုက်ချင်နေတာလည်း သူပဲ၊ ကိုစံခါးက ဓါတ်မီးယူပြီး အတွင်းထဲ သွားကြည့်နေတယ်၊ ဒါနဲ့ ကျနော် လည်း အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး မြေကြီးပေါ် ဟိုစမ်းဒီစမ်း လုပ်တော့ ထွန်းထွန်းရဲ့ ခြေထောက်ကို သွားဆွဲမိလို့ သူရော၊ ကျနော်ပါ လန့်သွားသေးတယ်၊ အထဲမှာက ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ်မမြင်ရလောက်တဲ့အထိ ပိန်းပိတ် အောင်ကို မှောင်ပါတယ်၊ ကျနော့်လက်က ဝါးကပ်တစ်ချပ်ကို စမ်းမိတယ်၊ ဒါနဲ့ အဲဒီပေါ်မှာပဲ အပိုပါလာတဲ့ အင်္ကျီကိုခြုံပြီး အိပ်လိုက်ရတယ်၊ ကျနော် ထူးထူးဆန်းဆန်း ချက်ချင်းပဲ အိပ်ပျော်သွားတာ မိုးလင်းမှပဲ နိုးတော့တယ်၊
နောက်တစ်နေ့မနက် ရွာသားတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ထွက်တော့ နေတောင် အတော်မြင့်နေခဲ့ပြီ၊ အပြန်မှာ တော့ တောင်ကြောတွေ ပေါ်ကို တည့်တည့်တက်ရလို့ ပိုပင်ပန်းပါတယ်၊ ခေါင်းမူးပြီး အသက်ရှူမဝ ဖြစ်တာ ခဏခဏပဲ၊ ကိုစံခါး ယူလာတဲ့ ဂလူးကို့စ်အမှုန့်တွေကို ခပ်များများစားလိုက်မှ နဲနဲသက်သာတယ်၊ မွန်းတိမ်း ပိုင်းလောက် ရွာငံပြန်ရောက်တော့ လမ်းပြဦးလေးကြီးက သူ့အိမ်မှာ အမှတ်တရ ညစာ,စားဖို့ ကျနော်တို့ကို ဖိတ်လို့ သွားဖြစ်တယ်၊ ရွာမှာက တခြားစားသောက်ဆိုင် မရှိလို့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကပါ ကျနော်တို့အနား လာထိုင်ရင်း စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်၊ ဖော်ရွေပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ၊ အဲဒီညက အားလုံး ဗိုက်လေးလေးနဲ့ အိပ်လိုက်ကြတာ နောက်တစ်နေ့မနက် ၅ နာရီထွက် တဲ့ အောင်ပန်းကားကို လွတ်သွားတော့မလို့၊ တည်းခိုခန်းက လာနှိုးမှ ကျနော်တို့အားလုံး ကတိုက်ကရိုက်နဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ထပြေးရတယ်၊ မျက်နှာတောင် မသစ်နိုင်ဘူး၊
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးနေရင်းနဲ့ကို ဒီအကြောင်းတွေက တကယ်ပဲ ဖြစ်ခဲ့တာလားလို့ ခဏခဏ တွေးနေမိသေး တယ်၊ တချို့အဖြစ်အပျက်တွေက ပြက်ပြက်ထင်ထင် မှတ်မိနေသလောက် တချို့ဟာတွေကိုတော့ အတော် လေးကို စဉ်းစားယူရပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဂူမြေပုံကြမ်းကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ ကျန်နေခဲ့ပြီ၊ တချို့လူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၈၀၀ လောက်က ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆီ ကို သွားလည် ကြတယ်၊ တချို့က နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အီဂျစ်တို့ရဲ့ အံ့မခန်း ပိရမစ်တွေဆီကို သွားလည်ကြတယ်၊ ကျနော်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လောက်က ဆွဲခဲ့တဲ့ တစ်ကြောင်းမျဉ်း နံရံပန်းချီလေးတွေကို ကြည့်ဖို့ လူရိုင်းတို့ရဲ့ အရပ်ကို အလည်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်...။ ။
၆ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 7.2.11 19 comments
Labels: Trekking, Voyage
ဒီနေ့ နေ့လယ်စာကို ကင်န်တင်းမှာ Jean-David နဲ့ စားဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလူက ကျနော်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ပါ၊ ကျနော့်အလုပ်မှာ လူအချို့က နားနေခန်းထဲမှာ အိမ်ကယူလာတဲ့ဟာ တစ်ခုခု စားကြသလို တချို့ကလည်း အလုပ်စားပွဲမှာပဲ ဆင်းဒဝစ်ခ်ျလိုမျိုး တစ်ခုခု စားတတ်ကြတယ်၊ ကင်န်တင်းမှာ စားတဲ့သူဆိုလို့ အများဆုံးက ကျနော်နဲ့သူပဲ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီမှာ သူကပြောတယ်...၊
မနေ့ညက သူ့သားလေးက သူ့ကိုပြုံးပြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်-တဲ့၊ ဒါနဲ့ သူက “ဘာပြုံးတာလဲကွ” လို့ လှမ်းမေးလိုက်တော့ ၇ နှစ်အရွယ် အဲဒီကလေးက “အင်း..အဖေ့လိုလူကို အဖေအဖြစ်ရထားတာ သားတော့ ကံကောင်းတာပဲ”လို့ ပြန်ပြောတယ်-တဲ့၊ ဒါကို ပြောနေတဲ့ သူ့မျက်နှာမှာ ပီတိတွေနဲ့ တဖိတ်ဖိတ်လက်လို့...၊ ကျနော်က သူ့ကို “ဒါ အဖေတစ်ယောက်အတွက် အင်မတန်လှတဲ့ ချီးမွမ်းစကားလေးပဲ” လို့ စကားထောက် ပေးလိုက်တယ်၊ တဆက်ထဲ “ကျနော်လည်း အဲဒီလိုစကားမျိုး မနေ့ညကပဲ လက်ဆောင်ရလိုက်တယ်ဗျ”လို့ ကျနော့်အဖြစ်ကိုပါ ပြန်ပြောဖြစ်တယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်..၊ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့ညက သားကလေးက ကျနော့်ကို အဖေတိုင်းကြားချင်ကြမယ့် စကားလေးတစ်ခွန်း ပြောတယ်၊
“ ပါပါး... ပါပါးက သားသားရဲ့ အသဲတုံးကြီး ” တဲ့....၊
အေးလွန်းလို့ ရေတောင်ခဲနေတဲ့ ရာသီမှာ ကျနော် တထိုင်တည်း အရည်ပျော်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ သူက အဲဒီစကားကို မြန်မာလို ပြောလိုက်တာ...၊ အမှန်တော့ သူက ကျနော့်ရဲ့ လက်သုံးစကားကိုယူပြီး ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်လိုက်တာပါ၊ သား ငယ်ငယ်တုန်းက ဝဝကစ်ကစ်လေးဆိုတော့ ကျနော်ကသူ့ကို “ပါပါးရဲ့ အသဲတုံးကြီး”လို့ မကြာခဏ ခေါ်လေ့ ရှိခဲ့တယ်၊ အခုသူက အဲဒီစကားကိုပဲ subject နဲ့ object ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ပြန်ပြောတာ....၊ ဒီစကား ဘာ့ကြောင့်ပြောတာလဲ ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်ဇတ်လမ်းကဒီလို..၊
မနေ့ညက ၉ နာရီလောက် ကျနော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားကို သူ့အမေက သိပ်ထားနှင့်ပြီ၊ ဒါပေမယ့် သားက နဲနဲကြီးလာတော့ ၈ နာရီခွဲမှာ သိပ်လေ့ရှိပေမယ့် ၉ နာရီခွဲလောက်မှ အိပ်ပျော်ချင်ပျော်တာ...၊ အဲဒါ ကျနော့်ရဲ့အသံကြားတော့ သူက ပြေးထွက်လာတယ်၊ သူ့အမေက “ဟင်,ကြည့်စမ်း...အိပ်ရာထဲရောက်ရင် ပြန်မထရဘူးဆိုတာ... ...”လို့ စကားတောင် မဆုံးသေးဘူး သူက “မဟုတ်ဘူး၊ ပါပါးကို ကြိုမလို့”လို့ ပြောလည်းပြော၊ ကျနော့်ပေါ်ကိုလည်း ခုန်တက်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က ပြန်ပွေ့ချီလိုက်တာ မြင်တော့ သူ့အမေက မျက်စောင်းတချက်ထိုးပြီး ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘူး၊ သိပ်မကြိုက်ပေမယ့် ဒီဇတ်ကို ကျနော်ဆက်က ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လွှတ်လိုက်တာပါပဲ၊
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း သားကို အိပ်ရာထဲပြန်ပို့ရင်း ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပြောပြလိုက်ရတယ်၊ တကယ်ဆို သူ့အမေက လည်း ပုံပြောပြထား ပြီးသားပါ၊ ဒါနဲ့တင် မပြီးသေးဘူး၊ သူ့ကို သီချင်းဆို သိပ်ပါဦး ဆိုလို့ ကျနော်လည်း “မိတ္ထီလာကန်တော်အောက်မှာ ကြောင်ကြီးရဲ့ မြီးတံတို” လိုက်ရပြန်တယ်၊ ဒါလည်း မဟုတ်သေးပြန်ဘူး၊ သီချင်းဆုံးတော့ ဆရာလေးက သူနဲ့ ၅ မိနစ် နေပါဦးဆိုလို့ ကုတင်ဘေးမှာ ထိုင်နေရပြန်ရော...၊ ဒါပေမယ့် သူက တော်တော်နဲ့ အိပ်မယ့်ပုံမရှိတော့ ကျနော်က “ကဲ..သားရေ၊ ဒီလောက်ဆို တော်ပြီနော်၊ ပါပါး ဘာမှလည်း မစားရသေးဘူးကွ”ဆိုပြီး ထမယ် အလုပ်မှာ သူက အဲဒီစကား လှမ်းပြောလိုက်တာပါ၊ သားက ၃ နှစ်ခွဲပေမယ့် ကြိုးကွင်းပစ်နည်း ကောင်းကောင်း တတ်နေပါပြီ၊ ကျနော် တခါထဲ ဖင်ထိုင်ရက်ပြန်ကျတယ်၊ အဲဒီမှာတင် နောက်ထပ် ၃ မိနစ်လောက် ထပ်ကြာသွားသေးတယ်၊ လူလည်လေး... ...၊
ကျနော့်စကားဆုံးတော့ Jean-David က ကလေးတွေအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ခံစားမှုကို express လုပ်တာဟာ ကောင်းကြောင်း၊ သူနဲ့ သူ့မိဘတွေကြားမှာ ဒီလိုမျိုး ဘာမှပြောလေ့ မရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ချတယ်၊ ကျနော် ကျတော့ရော...၊ ကျနော်လည်း မှတ်မိသလောက်တော့ အဖေအမေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ပြောလေ့ မရှိဘူး၊ သူတို့ ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေကို ပြောမပြတတ်အောင် ချစ်တာတော့ ယုံမှားသံသယ စိုးစဉ်းမျှ မရှိပါဘူး၊ ကျနော် ဆိုလိုတာက ချစ်ခြင်းဟာ စကားလုံးတွေအဖြစ် မစီးဆင်းခဲ့ဘူး ဆိုတာ သက်သက်ပါ၊ တခြား မိဘနဲ့ သားသမီးတွေ ကြားမှာကော၊ “ချစ်တယ်”ဆိုတာ ပြောဖူးသလား၊ ပြောတတ်ကြသလား၊ ဒါဟာ ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ မျိုးဆက်နဲ့ ဆိုင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဓလေ့ထုံးစံ ကိစ္စ တစ်ခုသက်သက်ပဲလား၊ တကယ်တော့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းဟာလည်း အသိအမှတ်ပြုမှု တခုပဲ မဟုတ်လား...၊
ကျနော်တို့ အဖေနှစ်ယောက် အတွက်တော့ မနေ့ညက မြစ်ဖျားခံလာတဲ့ ပီတိမြစ်က ဒီနေ့,နေ့လယ် ထမင်းစားပွဲပေါ် အထိ စီးတုန်း... ...။ ။
၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 2.2.11 23 comments